Madaxweyne Farmaajo oo maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Riyaad (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Riyaad (SAWIRO)
Wafdi uu hoggaaminaayo madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta gaaray magaalada Riyaad ee dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya, iyadoona halkaasi si diiran loogu soo dhaweeyay.
Wafdiga madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Riyaad kusoo dhaweeyay ku-xigeenka Amiirka gobolka Riyaad Amiir Maxamed Ibnu C/raxmaan Bin C/casiis iyo saraakiil kale.
Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa lagu wadaa inay ka qeyb galaan shirka maanta magaalada Riyaad uga furmaya madaxda dalalka Islaamka iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, waxaana shirkaasi looga hadli doonnaa arrimo badan oo xasaasi ah.
Inta uu shirkaan socdo ayaa waxaa diiradda lagu saari doonnaa la dagaalanka kooxaha argagaxisada ah, waxaana ka qeyb galaya inta badan madaxda dalalka Islaamka iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho ku jooga dalkaasi Sucuudiga.
Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo ayaa lagu wadaa in shirka kadib uu kulan gaar ah la yeesho qaar ka mid ah madaxda shirka ka qeyb galeysa iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isagoona madaxdaasi kala hadli doonno sidii dowladiisa gacan looga siin lahaa la dagaalanka kooxda Al-shabaab, kuwaas oo dhibaato weyn ku haaya horumarka dalka Soomaaliya.